Boqorka oo booqanaya xaafada Seved ee Malmö | Somaliska
Boqorka Sweden Carl Gustaf ayaa booqanaya xaafada Seved ee magaalada Malmö taasoo ah goob ay aad ugu badanyihiin Soomaalida. Seved ayaa ah goobaha lagu tiriyo kuwa ugu dambiyada badan magaalada Malmö ayadoo sida Rosengård ay ku badan yihiin soo galootiga. "Waxaan dareemaya sharaf, waa maalin taariikhi ah" ayuu saxaafada u sheegay Warsame Cusman Yasin oo ah gudoomiyaha Jaaliyada Hidde iyo Dhaqan oo ka dhisan Malmö. 5 ka mid ah dhalinyarada xaafada ayaa la kulmi doona boqorka ayagoo ku soo wareejin doona agagaaraha. Warsame ayaa aaminsan in Boqorku uu qeyb ka qaadan karo is dhexgalka oo uu isbedel ku keeni karo xaafada Seved. Booliska Malmö ayaa sheegay in xaalada amaanka ee xaafada ay ka soo reynayso ayagoo amaaney wadashaqeynta ay ka helaan bulshada ku dhaqan Seved. Magaalada Malmö ayaa dadka ku nool 3 meelood 1 meel ay yihiin soo galooti ayadoo xaafadaha qaar ay yihiin kuwo lama galaan ah oo amaan daro xun ka jirto, xaafada caanka ah ee Soomaalida ay ku badan yihiin ee Rosengård ayaa ka mid ah goobaha lagu tiriyo qalalaasaha badan. Sanadkii la soo dhaafay ayay cakirantahay xaalada amaanka ee Malmö ka dib markii uu soo baxay nin si gaar ah u raadsanaya soo galootiga kaasoo dhowr qof dilay tiro kalena dhaawacay. Ninkaas ayaa ugu dambeyn booliska gacanta ku dhigeen asagoo hada xabsiga ku jira.
Boqorka Sweden Carl Gustaf ayaa booqanaya xaafada Seved ee magaalada Malmö taasoo ah goob ay aad ugu badanyihiin Soomaalida. Seved ayaa ah goobaha lagu tiriyo kuwa ugu dambiyada badan magaalada Malmö ayadoo sida Rosengård ay ku badan yihiin soo galootiga.
“Waxaan dareemaya sharaf, waa maalin taariikhi ah” ayuu saxaafada u sheegay Warsame Cusman Yasin oo ah gudoomiyaha Jaaliyada Hidde iyo Dhaqan oo ka dhisan Malmö.
5 ka mid ah dhalinyarada xaafada ayaa la kulmi doona boqorka ayagoo ku soo wareejin doona agagaaraha. Warsame ayaa aaminsan in Boqorku uu qeyb ka qaadan karo is dhexgalka oo uu isbedel ku keeni karo xaafada Seved.
Booliska Malmö ayaa sheegay in xaalada amaanka ee xaafada ay ka soo reynayso ayagoo amaaney wadashaqeynta ay ka helaan bulshada ku dhaqan Seved.
Magaalada Malmö ayaa dadka ku nool 3 meelood 1 meel ay yihiin soo galooti ayadoo xaafadaha qaar ay yihiin kuwo lama galaan ah oo amaan daro xun ka jirto, xaafada caanka ah ee Soomaalida ay ku badan yihiin ee Rosengård ayaa ka mid ah goobaha lagu tiriyo qalalaasaha badan.
Sanadkii la soo dhaafay ayay cakirantahay xaalada amaanka ee Malmö ka dib markii uu soo baxay nin si gaar ah u raadsanaya soo galootiga kaasoo dhowr qof dilay tiro kalena dhaawacay. Ninkaas ayaa ugu dambeyn booliska gacanta ku dhigeen asagoo hada xabsiga ku jira.
Gabar Soomaali ah oo Tanzania loo musaafurinayo
Salaaxu diin says:
Waxaan u arkaa , arin waqtigeedii aw Boqorka Sweden kasoo habsaamay , haddase wax caymin karta !!
Dabcan waa in Bulshada aan la noolna wax la qaybsano , inagoon Diinteena iyo dhaqankeena dayacin 1